Madaxda ku shirsan Jabuuti ayaa ku baaqay in dhaqaalo dheeri ah loo qoondeyo waxbarashada wadamada Gobolka. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Worldnews Madaxda ku shirsan Jabuuti ayaa ku baaqay in dhaqaalo dheeri ah loo...
Madaxda ku shirsan Jabuuti ayaa ku baaqay in dhaqaalo dheeri ah loo qoondeyo waxbarashada wadamada Gobolka.
Hoggaamiyeyaasha waxbarashada Afrika ayaa ugu baaqay dowladaha in ay kordhiyaan qoondeynta miisaaniyada isla markaana ay sara uqadan tayada waxbarashada.
ayaga oo ka hadlayay hogaanada wasiirada wasaradaha waxbarashada shirka caalamiga ah ee isku-dheelitirka iyo waxbarashada loo dhan yahay (shirkaSaddexaad ee BIE 2030) ee ka dhacay caasimada dalka Jabuuti ayeey ku sheegen in tani qy ka dhigeyso mid ay u dhan yihiin madaxda, caruurtana ay ku heli karaan waxbarsha tageysaa.
Shirka ayaa isu keenaya daneeyayaasha waxbarashada ee ka kala socda 36 dal oo ka kala yimid Saxaraha Afrika, Koonfur Bari Aasiya, Latin America, iyo Yurub.
Shirku wuxuu bilaabmay Isniinta wuxuuna dhammaanayaa Khamiista.
Shirka ayaa waxaa soo qaban qaabiyay hay’adda samafalka ee waxbarashada iyadoo lala kaashanayo dowladda Jabuuti.
Madaxa Mu’asasada Sheekh Manssour Bin Mussalam ayaa dowladaha kula dardaarmay inay wax ka badalaan siyaasadaha waxbarasho ee hada jira isla markaana ay kordhiyaan qoondeynta miisaaniyada si waxbarashada ay u noqoto mid loo dhan yahay oo ay heli karaan dhammaan carruurta.
Caqabadaha horyaalla waxbarashadu waa kuwa cadaaladda bulshada. Mar dambe ma aqbali karno nidaamyada waxbarashada ee dhiirrigelinaya sinnaantu, ”ayuu yidhi Mr. Mussallama.
Mr. Mussallama wuxuu yiri adduunku waa inuu rajeynayaa mustaqbal kaas oo ku lug leh ka-qaybgalka waxbarashada iyo dib-u-habeeynta manhajka.
Wuxuu sheegay in siyaasadaha waxbarashada aysan jirin wax aan micno lahayn oo ay tahay in waddamadu ay si joogto ah uga shaqeeyaan hagaajinta manhajka iyo kaabayaasha, tababbarayaasha macallimiinta iyo in la hubiyo in buugaagta buugaagta laga heli karo dugsiyada.
“Waa inaan ku dhawaaqnaa luqad caadi ah oo aan qeexeynaa fahamkeenna ku aaddan sinnaanta iyo ka mid noqoshada. Waa inaan horumarinno istiraatiijiyad cad oo aan ku hubinayno in nidaamka oo dhami ay wadajiraan, ”ayuu yidhi
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sheegay in waddankiisu qaatay hannaanka siyaasadaha waxbarashada loo dhan yahay.
Raiiselwasaaraha Uganda Ruhakana Rugunda ayaa sheegay in wadanku uu ka go’an yahay waxbarasho loo dhan yahay oo ka jawaabaysa xuquuqda caruurta.
Ahmiyada la saaraayo waa inay ahaataa astaamaha cunug kasta. Uganda waxay hubisay inuusan cunug na uu san Kaharin waxbarashada, ”ayuu yidhi.
madaxda kalle ee goob joog ka ahaa kulanka waxaa ka mid ahaa ra’iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya iyo ra’iisul-wasaaraha Niger iyo Togo.
Madaxda ku shirsan Jabuuti ayaa ku baaqay in dhaqaalo dheeri ah...
Madaxweynaha Turkiga oo farriin u direy Dowladda Jarmalka